Global Voices teny Malagasy » Belarosia: Hatsikana Ara-politika · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Jona 2019 12:03 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Belarosia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aprily 2006- Mitondra mankany aminà tranonkala miteny rosiàna ny rohy rehetra raha tsy misy fanamarihana manokana)
Mbola tohizan'ireo blaogera taorian'ny vanimpotoana Sovietika ny fomba fanao sovietika taloha ela be, dia ny fiatrehana ny zava-misy sy ny fanehoana ny fisintahany amin'ny alalan'ny hanihany politika (politicheskiye anekdoty) – rakitsoratra toa tsy manan-tsiny izay tsy dia mendrika loatra ny ho atao printy ao anatina fiarahamonina mpamoritra ary tsy handeha mihitsy any amin'ny fahitalavi-panjakana any amin'ny firenena toa an'i Belarosia. Hitanao etsy ambany etsy ireo hatsikana vitsivitsy (nadika avy tamin'ny teny Rosiana avokoa) nipoitra tany amin'ny vaovao anaty fahitalavitra Belorosiana nandritra sy taorian'ireo fihetsihetsehana natao tamin'ny volana lasa teo nanoherana ireo fifidianana filoham-pirenena feno hosoka.
Mamoaka hatsikana momba ny rivotra iainana kidaladala sy ondranondranana ao Belarosia i vadea, mpampiasa LJ:
Mpiasan'ny KGB roa no anatina fiarandalamby ary mifampitantara hatsikana politika.
-Iray segondra aloha, ovaiko ilay kasety, -hoy ny iray.
-Aza misahirana, afaka mandika amin'ny ahy ianao avy eo, -hoy ilay iray hafa.
Mizara  hatsikana iray izay zatra nanasongadina ny filoha Okrainiana teo aloha, Leonig Koutchma, nandritra ny revolisiona volomboasary tamin'ny 2004 i chernidar, mampiasa LJ; Mazava ho azy, mikasika ny filoha Belarosiana Aleksandr Lukashenko ilay dikany vaovao:
Mamakivaky ala ny filoha […] dia very. Mahita zazalahy izy:
-Ry boay kely, mba afaka atoron'ialahy ahy ve ny fomba hivoahako amin'ity ala ity? Izaho no filoha ary homeko ny medalin'ny Maherifo ialahy!
-Hanontaniako ny mamako.
Adin'ny iray taty aoriana:
-Ry dadatoa Filoha, ary hanome ahy valisoa aorian'ny fahafatesana ve ianao?
-Nahoana no aorian'ny fahafatesana?
-Satria, hoy i neny hoe, ho vonoiny aho raha manoro lalana anao!
Mamoaka  iray hafa mikasika ny fihetseham-pon'ireo vahoaka Belarosiana momba an'i Lukashenko (fantatra toy ny ‘rain'i Bat'ka) ny mpampiasa LJ, morreth:
Indray andro, nentina tamin'ny fiara limozina i Bat'ka hankany amin'ny tanàna iray. Nanitsaka ny kisoan'olona iray izy. Mijanona i Bat'ka, olona tsara toetra, manome 100 $ ho an'ny mpamiliny ary milaza aminy mba hitady ny tompon'ilay kisoa maty ary hiala tsiny. Lasa ilay mpamily ary tsy niverina raha tsy adin'ny roa taty aoriana, mamo tampona. Notreronin'i Bat'ka izy hoe: “Adala ve ianao e?” Mamaly kosa ilay mpamily hoe: “Tsy nanao ratsy anie aho e: nalaiko ilay vola, nataoko tao anaty harona ilay kisoa, natao tao an-damosiko ary nidina tany amin'ny lalana mankany amin'ny tanàna aho ary nihoakoaka hoe – Rey olona oh! Izaho no mpamily ny fiaran'i Lukashenko ary avy namono ity kisoa ity aho! – ary tampoka teo dia nihazakazaka nankaty amiko avokoa izy rehetra, nitomany tamim-pifaliana ary nanomboka nifandimby nandraraka toaka ho ahy avokoa…”
Hatsikana mikasika ireo voka-pifidianana  avy amin'i macsim_b, mpampiasa LJ:
Miditra ao amin'ny biraon'i Lukashenko i Yermoshina [Lehiben'ny Vaomieram-pifidianana faobe] ary milaza:
-Manana vaovao roa ho anao aho ry Aleksandr Grigorievich, tsara ary ratsy. Atomboko amin'iza?
-Voafidy ho filoham-pirenena ianao.
-Eny ary, ary ilay ratsy?
-Tsy nisy nandatsa-bato ho anao.
Hatsikana iray mikasika ny fiafarana mahery vaikan’ilay famoriam-bahoaka tamin'ny 25 Martsa , avy amin'i geroi, mpampiasa LJ:
Nandritra ny fihetsiketsehana natao tany Minsk, nanafika ary nandratra polisy 2 000 mpandrava korontana tamin'ny alalan'ny vongan-dranomandry sy balaonina abontsin-drivotra ireo vehivavy, olona efa mahazoazo taona ary ankizy miisa 500. “Nifamory izahay, mba hihetska, araka izay nifanarahana, nampanakaikezinay ny ampinganay ary nezahanay ny hanosika moramora ireo mpanao fihetsiketsahana tamin'ny alalan'ireo kibay fiadianay amin'ny fivoriam-bahoaka. Fa nihazakazaka nankaty aminay tamin'ny fomba feno herisetra izy ireo, toy ny biby, ary nanomboka nidaroka ny arolohako tamina voninkazo sns, hatrany hatrany, alikan'olona,” hoy ny iray tamin'ireo tra-boina ary tonga dia nanomboka nitomany avy eo.
Hatsikana iray avy amin'ny toby fialofana  ao Oktyabrskaya Square any Minsk avy amin'i mirilde, mpampiasa LJ,:
Mifoha i Lukashenko ny maraina, mankao amin'ny biraony ary mametaka ny sariny eo amin'ny rindrina:
-Inona ary izao no ataontsika mikasika ny toe-javatra misy ankehitriny ry Aleksandr Grigorievich?
-Ah, tsinontsinona koa: hifanakalo toerana aminao fotsiny izahay.
-Amin'ny fomba ahoana?
-Tsotra be: Ho voaongana aho, ary hahantona ianao.
Farany, hatsikana mikasika ireo fanatsarana sy lainga  nalefan'ny fahitalavi-panjakana any Belarosia, avy amin'ny mpampiasa LJ, kurt_bielarus:
Maty i Lukashenko. Miarahaba azy ny devoly iray ary mampitsidika azy ny Paradisa. Toa mety, mendrika ary mangina avokoa ny zavatra rehetra ao: mihira ny vorona, mivelatra ny voninkazo, miresaka ny olona tso-po isan-karazany. Tsy misy hodi-boasary na iray aza.
Manomboka manontany tena i Lukashenko: ” ary ohatry ny ahoana ny any amin'ny helo? Milaza ilay devoly hoe “Ianao ihany dia afaka mahita izany!” ary mampiseho azy ny Helo. Tena maresaka be ao, mivezivezy ny vehivavy tsara tarehy maro ary tena feno fiainana amin'ny ankapobeny ao. Mientanentana i Lukashenko ary mihiaka hoe: “Te-ho any amin'ny helo aho!”
Ary avy hatrany dia lasa tao anaty rano mangotraka .
Nihiaka tamin'ilay devoly izy hoe: “Fa aiza ilay zavatra rehetra hitako teo – vehivavy, fanafinaretana?”
Izay novalian'ilay devoly hoe, sady nitsiky ihany: “Manana – toa anao ihany – [ny fahitalavitro Belarosiana] ny tenako!”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/06/30/138330/
 ireo voka-pifidianana: http://macsim-by.livejournal.com/80750.html
 ilay famoriam-bahoaka tamin'ny 25 Martsa: http://community.livejournal.com/minsk_by/1197782.html
 amin'ny toby fialofana: http://kurt-bielarus.livejournal.com/300939.html?thread=1780875#t1780875
 fanatsarana sy lainga: http://kurt-bielarus.livejournal.com/300939.html